Ndị ọzọ ascessories Factory |China Ndị na-emepụta asscessories ndị ọzọ, ndị na-eweta ngwaahịa
2022 Ọhụrụ Amazon Hot ire Silicone Faucet Mat Maka Sink kichin
Anyị silikone foset ute na-akpaghị aka igbapu mmiri gburugburu faucet n'ime sink, idobe gị countertop nkụ na Clean.This n'ezie lebara nsogbu nke ngafe mmiri gburugburu facet gị kichin na ime ụlọ ịwụ.
Aha ngwaahịa: Igwe mmiri silicone maka kichin kichin
Ihe: 100% Silicone nri ọkwa
Nha: 14.6 * 5.6 inch
Aha ika: Enwere ike ịhazi ya
Factory ahaziri refrigerator Magnet mara mma udi Silicone metal karama oghere maka biya
The silicone bottle opener made of quality magnet, igwe anaghị agba nchara na adụ silicone, eyi na corrosion na-eguzogide ọgwụ, nke ga-akwado gị a ogologo oge service.And ha niile nwere ọmarịcha udi imewe, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụta a nnukwu quantity, anyị nwere ike na-anabata gị. omenala na-emeghe ọhụrụ ebu.
Aha ngwaahịa: Ihe mmeghe nke silicone
Ụdị: mara mma
Nha: 7 * 4.2 cm
Arọ: 25 g
Ọnụahịa otu: 0.5-1.2 USD
Lelee aka na-ehicha ihe n'ụdị mgbawa mgbaaka nkwojiaka nkesa silicone Hand Sanitizer Wristband
(Efefela ọkpụkpọ ma ọ bụ mejuo ya) Tinye mkpuchi nozzle ka ọ ghara ịpụpụ.
Mepee mkpuchi wee pịa elu nke eriri aka ka ịhapụ ihe nchacha aka.
NDỤMỌDỤ: Ọ bụrụ na ntapu pụtara gbalịa ibelata ego sanitizer site na 1/4.
Ngwaahịa ịdị ọcha nwanyị N'ogbe OEM nkwakọ ngwaahịa ụmụ nwanyị oge iko iko Silicone dị nro
Akụrụngwa dị mma: Anyị maara na ọ nwere ike ịdị nro n'okpuru ebe ahụ ka anyị na-eji naanị ihe nchekwa!Obere iko nsọ nwanyị anyị bụ Dioxin Free, Phthalate Free, Latex Free, BPA efu.
6 Pack Stretch Sizes Tọọ ụdị ọkọlọtọ ọkọlọtọ efere efere nchekwa nchekwa mkpụrụ ihe mkpuchi eji emegharị ihe mkpuchi na-agbanwe agbanwe na-adịgide adịgide kacha mma mkpuchi silicone.
Nchekwa nri na nchekwa ọhụrụ: mkpuchi silicone na-agbatị ihe oriri nwere ọtụtụ nha, dabara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ tubs ọ bụla, mkpụrụ osisi na ihe ọ bụla ọzọ ịchọrọ ịchekwa ihe mkpofu site n'ime ka ha dị ọhụrụ ogologo oge.
Igwe anaghị agba nchara dị ọnụ ala na-ahapụ njem Strainer Portable Silicone Leaf Tea Filter Infuser Tea Steeper Loose Leaf
Ejiri silicone ọkwa nri dị ọcha na igwe anaghị agba nchara rụọ ya, ọ dịkwa mma iji ya.
Ọ dị mfe ihicha: Tufuo akwụkwọ ndị e jiri mee ihe wee jiri mmiri ncha na-ekpo ọkụ saa yaTii na-atọ ụtọ dị ọcha, dị ọhụrụ, ka ị nwee ike ịnụ ụtọ oge ọ bụla nke tii gị.
Mee ka mmụọ gị zụọ ma banye na ahụmịhe ahụ.
Ihe nhazi ntị anụ ọhịa mara mma nke oke bekee na-ejide eriri Silicone Cable Winder
Mara mma nnukwu anya ikwiikwii CABLE ORGAINZERS: SUNFICON magnetik cable clips nwere nnukwu anya ikwiikwii udi dị iche iche color.N'ezie ụmụaka, enyi gị na ị ga-ahụ ha n'anya!Ọ ga-abụ nnukwu onyinye maka ụbọchị ọmụmụ, Krismas n'oge ọ bụla.
Ngwaahịa dị mma nke ọnụ ụzọ nkuku silicone na-eche nche nchebe ihu nchekwa nwa ọhụrụ
Ụrọ, DENSE na ỌDỊGHỊ: Onye nchebe nkuku nchekwa nwa anyị bụ njupụta 22-N / 0.47-inch ma ọ bụ akwa ụfụfụ rọba dị elu, dị nro na nke siri ike iji nweta mmetụta ahụ ma chebe ụmụ gị ka ọ ghara ịdị nkọ.Nyere aka inye ụmụ gị ebe dị mma iji meju ọchịchọ ịmata ihe na ọchịchọ ya inyocha.